8 Maxbuus oo ku Muslimay xabsi ku yaalla Dubai | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada 8 Maxbuus oo ku Muslimay xabsi ku yaalla Dubai
8 Maxbuus oo ku Muslimay xabsi ku yaalla Dubai
Bulsha:- Sideed ka mid ah Maxaabiista ku xiran Xabsiga dhexe ee Magaalada Dubai dalka isu tagga Imaaraadka Carabta ayaa qaatay Diinta Islaamka kaddib markii ay ka heleen sida ay ula dhaqmeen ilaalada Xabsiga.
Ali Maxamed Al-shamali oo ah agaasimaha guud ee laanta xabsiyada Dubai, in Maxaabiistan ay xabsiga ku heleen daryeel wanaagsan islamarkaana ay qaateen Diinta Islaamka.
Waxaa kale oo uu intaas ku daray in intii ay ku jireen Xabsiga aysan la kulmin cusuriyad la xiriirta waxa ay aaminsanyihiin,islamarkaana si wanaagsan loo baray dhaqamada iyo dabeecada Islaamka.
Sucuud Caziiz Al-Raxmaan oo ah Sheekh caan ka ah gudaha Imaaraadka ayaa Maxaabiistan Islaamka ku biirtay u qabtay Towxiidka,waxaana uu intaas kaddib Booliska Dubai uga mahad celiyay dhaqanka Wanaagsan ee ay kula dhaqmeen Maxaabiistaas oo aan markoodii hore Muslim ahayn.
Waxaa kale oo uu u mahad celiyaya Shaqaalaha Xabsiga dhexe ee Dubai oo aan Maxaabiista u kala saarin,Midib,Diin, dhaqan iyo wax yaabo kale.
21kii Bishan ayaa sidoo kale saddex ka mid ah Maxaabiista Xabsiga dhexe ee Sharjah ay qaateen Diinta Islaamka kaddib markii ay sheegeen in ay ka heleen dhaqanka wanaagsan ee Islaamka,saddexdaas Maxaabiis ayaa u dhashay Dalka Philippines.